लुगा मा टंकशाला रंग - फैशन प्रवृत्ति 2013
एक प्रश्नको जवाफ को खोज मा बारेमा फेसनमा कुन रंग मेन्थल को रंग - SPRINGSUMMER 2013 बालिका मौसम को वास्तविक रंग बीच याद। उहाँले के चाहनुहुन्छ गर्छ?
टंकशाला रंग, सामान्यतया ताजा कुरा र प्रकाश, वसन्त र रोमान्टिक सम्बन्धित। एकै समयमा यो शक्ति र समुद्र को रंग छ। पहिलो एक नरम छ हरियो को छाया वा फिरोजा, यो सिजन निकै लोकप्रिय भएको छ जो। आज मेन्थल लुगा र सामान बनाउन-अप, नङ पालिस, र अन्य विवरण भन्दा थप सान्दर्भिक। चाखलाग्दो कुरा, मेन्थल को रंग सार्वभौमिक मानिन्छ: यो कुनै पनि रंग, कुनै पनि आकार, कुनै पनि शैली को मालिक को लागि उत्तम छ। यो रंग रंग धेरै संग पूर्ण मिश्रणों र वस्त्र सामाग्री बिना धेरै राम्रो देखिन्छ। त्यसैले, कसरी चयन गर्न र लुगा मेन्थल को रंग लगाउने? यो के मेल? मेन्थल nuances अनुरूप? यो - मा।
मेन्थल को वस्त्र रंग चयन
प्रत्येक जो एक विशिष्ट छाला र कपाल रंग लागि उपयुक्त छ त धेरै रंग, भएकोले, एक छाडा अवधारणा - मेन्थल को रंग याद गर्नुहोस्। किन, जब लुगा छनौट, गुमाउन होसियार हुन र छवि बनाउन मा गल्ती नगर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, Brunettes उपयुक्त प्रकाश टंकशाला रंग, तर खैरो कपाल को मालिक राम्रो टंकशाला को गाढा रंग रुचि छ। सामान्य मा, यो एक विशेष छाया फिट वा छैन, तुरुन्तै देख्न सकिन्छ। यदि छैन - यो भण्डारमा उनको सामान्य ठाँउ मा कुरा रचनाहरू र थप उपयुक्त कुरा खोज्न राम्रो छ।
मेन्थल को रंग कसरी लगाउन?
ह्यु सही चुनिएको छ, तर तपाईं यस्तो लुगा कसरी लगाउने र के संयोजन गर्न थाहा छैन? यो धेरै सरल छ: टंकशाला कुनै पनि छाया सुन्दर रंग को एक किसिम संग संयुक्त। एउटै रंग फरक सामाग्री मा अद्वितीय देखिन्छ: कपास हुन्छ बढी "कोमल" ऊन - थप "सुन्दर।" यस्तो रंग रेशम वा शिफन रूपमा प्रकाश सामाग्री, राम्रोसँग Blends। प्रकाश गुलाबी, बेज, Milky, फिरोजा, सफेद: मेन्थल ठीक उपयुक्त र वसन्त 2013 को अन्य पस्टेल रंग द्वारा।
यो सबै भन्दा राम्रो मेन्थल नीलो संग संयुक्त छ। यो सबै गर्न उपयुक्त छ र छवि बिल्कुल कुनै पनि शैली मा सिर्जना गर्न मद्दत।
यो गर्मी मा महिलाहरु उज्ज्वल र संतृप्त टन रुचि कुनै गोप्य छ। सबै टंकशाला छाया मधुर स्वर जीवन्त रंग संग देखिन्छ किनभने, सावधान रहनुहोस्। सफल भिन्न बीच - उज्ज्वल पहेंलो, हरियो र सुन्तला देखि टंकशाला रंग।
आफ्नो लक्ष्य भने - एक कोमल र नरम तरिका सिर्जना गर्न, पुदीना प्यास्टेल outfit सामान थप्नुहोस्। प्यास्टेल (जस्तै कोमल लैवेंडर वा फिक्का गुलाबी) आफ्नो मन एक विशेष आकर्षण र स्त्रीत्व दिनेछु। धेरै राम्रो minty रंग सेतो देखिन्छ।
यो मेन्थल विभिन्न रंग सँगै संयोजन गर्न सम्भव पनि छ। यो सिजन मा सान्दर्भिक एक तटस्थ शीर्ष र सामान संग संयोजन मा मेन्थल जीन्स रूपमा मानिन्छ। यो छवि घण्टा वा धातु गहने टंकशाला रंग लागि थप्न राम्रो हुनेछ।
मेन्थल को रंग दैनिक लुगा र सुन्दर देखिन्छ कि अन्त नोट ककटेल कपडे, र jumpsuits। परीक्षण गर्न नडराऊ, र तपाईं निश्चित सबै अवसरका लागि अद्वितीय तस्बिरहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ!
के चरा टैटू महत्त्व छ?
लोकप्रिय ट्याटु "सुरक्षित गर्नुहोस् र सुरक्षित"
वसन्त रुझान संग पहिलो नियुक्ति।
निकलने वाला गुलाबी - अनुहार मा रातो रक्त नली
Dmitriy Almazov: जीवनी र काम
बन्दूक माउन्ट। यसको प्रकार र उद्देश्य
संरचना पशु सेल
मह Resort3* (फुकेत, थाईल्याण्ड): विवरण, फोटो र समीक्षा